Wararka - Maxaad ka ogtahay heerarka ilaalinta deegaanka ee daabacaadda buugaagta carruurta?
Caruurta Shiinaha ee daabacaada buugaagta buugaagta ayaa noqoneeysa mid barwaaqo soo kordheysa iyadoo waalidiinta ay ahmiyad gaar ah siinayaan akhriska iyo inbadan waalidiinta ayaa ahmiyad gaar ah siinaya akhriska. Mar kasta oo dukaan internetka ah la dallacsiiyo, xogta iibka ee buugaagta carruurta had iyo jeer waa wax aad u cajaa'ib leh. Isla mar ahaantaana, shuruudaha waalidiinta ee daabacaadda buugaagta carruurta ayaa sidoo kale isla mar ahaantaana kor u kacaya isla markaana leh shuruudaha ay ka kooban yihiin, gaar ahaan badbaadada iyo ilaalinta deegaanka ee daabacaadda buugaagta carruurta. Ururo badan oo daabacaad ah ayaa bilaabay inay calaamadeeyaan buugaagta waraaqaha carruurta sida "daabacadaha daabacan ee cagaaran" iyo "lagu daabacay khad soy".
Intee in leeg ayaad ka ogtahay heerarka ilaalinta deegaanka ee daabacaadda buugaagta carruurta xirfadleyda ah? Maqaalkani waa aqoonta ku habboon ee ay soo bandhigtay SmartFortune arrintan. Ereybixintu waxay noqon kartaa mid xirfad leh, laakiin dhibaatada ilaalinta deegaanka ee buugaagta carruurta waa dhibaato maalinle ah oo waalid kasta oo carruurta daryeela ay tahay inuu la kulmo. Waxaan rajeynayaa in tani ay sii kicin karto qof walba Qiime
Dhibaatada ilaalinta deegaanka ee buugaagta carruurta waa dhibaato maalinle ah oo waalid kasta oo daryeela carruurta ay tahay inuu la kulmo
Waalidiin badan ayaa hada ahmiyad weyn siiya beerashada dabeecadaha aqriska caruurta, sidaa darteed waxay u diyaarin doonaan waxyaabo kala duwan oo daabacan sida kaararka, buugaagta sawirka, iyo buugaagta caruurtooda. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan dhag u dhigin ama aadan ka taxadarin tayada alaabooyinka la daabacay markii aad u dooranayso carruurtan badeecadan daabacan, waxay u horseedi kartaa qaar ka mid ah alaabada daabacan inay yeeshaan heerar kala duwan oo saameyn taban ku leh caafimaadka carruurta.
Marka noocee daabacan ayaa keeni doona saameyn taban? Aynu ka hadalno ilaalinta deegaanka. Ilaalinta deegaanka ee waxyaabaha daabacan iyo tayada waxa daabacan yaan la isku khaldin. Tayada daabacaadda waxaa loola jeedaa qoraal cad iyo xariiqyo, iyo taranka midab sax ah. Ilaalinta deegaanka ee waxyaabaha daabacan waxay ka dhigan tahay in akhristayaashu aysan wax khatar caafimaad ah u keenayn akhristayaasha markay wax ku dhex akhrinayaan daabacaadda.
Xusuusashada gaarka ah ee buugaagta carruurta ayaa ah sababta oo ah carruurtu waxay u badan tahay inay ku cunaan walxaha waxyeellada leh ee daabacan marka ay wax akhriyaan. Marka hore, maxaa yeelay carruurta, gaar ahaan kuwa yaryar, waxaa laga yaabaa inay caado u leeyihiin jeexista iyo qaniinyada buugaagta markay wax akhriyaan; tan labaad, alaabada akhriska ee caruurta badankood waxay leeyihiin tiro badan oo sawiro midab leh, iyo qadarka khad la isticmaalay ayaa ka badan qoraalka caadiga ah. Sayidku wuxuu leeyahay buugaag badan. Sidaa darteed, buugaagta carruurtu waa inay lahaadaan heer ka sarreeya ilaalinta deegaanka marka loo eego buugaagta caadiga ah.
Marka la eego, waxaan falanqeyn karnaa astaamaha ugu muhiimsan ee carruurtu ku akhriyaan waxyaabaha daabacan: warqad, khad, koollo, iyo filim.
Khadku wuxuu ka koobnaan karaa benzene, gaar ahaan khafiifinta midabka. Dareeraha sida benzene ayaa loo isticmaalaa. Ka dib marka la daabaco buugga cusub, dareeraha ma aha mid gebi ahaanba is beddelay, akhristaha ayaa soo deyn doona ur aan fiicnayn ka dib furitaanka xirmada. Benzene iyo toluene waa cabitaanno leh ur xoog leh waana sun aad u daran. Kaliya maahan inay waxyeeleeyaan marinka neefta, laakiin sidoo kale waxay keenaan sumoob daran iyo curyaannimo habka dhexe ee neerfaha. Neefsashada muddada-gaaban waxay dadka ka dhigi kartaa dawakhaad iyo lallabbo. Soo-gaadhista muddada-dheer waxay dhaawici kartaa dhuuxa lafta waxayna sababi kartaa leukopenia iyo thrombocytopenia. Iyo dhiig yari dabadheer iyo wixii la mid ah.
Ilaha kale ee urta urku waa xabagta loo isticmaalo isku xidhka. Inta badan xabagta loogu talagalay ku xirnaanta buugaagta waxay isticmaashaa wakiil dhaqso u qalajiya. Maadadan kiimikada ah ee is bedbedesha ayaa guud ahaan baaba'a 10 ilaa 20 maalmood kadib. Si kastaba ha noqotee, buuggu wuxuu kuxiran yahay bacda baakadaha oo urta lama faafin karo, sidaa darteed akhristaha ayaa wali yeelan doona ur gaar ah ka dib markii uu gacanta ku haysto Intaas waxaa sii dheer, waraaqo tayo hoose leh iyo koollo ayaa ku jira qadar fara badan oo ah formaldehyde, wuxuu soo saaraa ur xoog leh. Soo-gaadhista muddada-dheer ee kiimikooyinka noocan ahi waxay waxyeello weyn u leedahay caafimaadka waxayna si daran u saamaysaa koritaanka jirka ee carruurta.
Intaas waxaa sii dheer, maadaama caadooyinka buugaagta caruurtu ka duwan yihiin kuwa dadka waaweyn, biraha culus ee laga yaabo inay ku jiraan khad iyo warqad tayo liidata, sida rasaasta, waxay jidhka bini'aadamka ka soo gali doontaa gacanta iyo afka ilmaha, waxayna saameyn ku yeelan doonaan jirka ilmaha. Halkan, waalidiinta waa in la xasuusiyaa in si loo yareeyo kharashka buugaagta burcad-badeedda, waraaqo liita, khad iyo koollo badanaa la isticmaalo. Warbixin adag oo tijaabo ah ayaa muujineysa in buugaagta la afduubay qaarkood ay ku jiraan 100 jibaar ka badan hogaaminta buugaagta asalka ah ee isku nooc ah. , Markaad u iibsaneyso buugaagta carruurta, fiiro gaar ah u yeelo aqoonsiga buugaagta burcad-badeedda.
Buugaagta dhabta ah, heerarka ilaalinta deegaanka waa in sidoo kale la qaataa si loo xadido waxa ku jira qaybaha waxyeelada leh ee daabacan.
Bishii Sebtember 14, 2010, Maamulkii Guud ee Guud ee Saxaafadda iyo Daabacaadda iyo Wasaaradda Ilaalinta Deegaanka ayaa kala saxiixday "Hirgelinta Heshiiska Iskaashiga Istiraatiijiyadeed ee Daabacaadda Cagaaran", iyadoo diiradda la saarayo xakamaynta adag ee haraaga birta culus iyo wasakheynta dabiiciga ah ee saddexda dhinac ah: khad iyo koollo dhalaalid kulul.
Oktoobar 8, 2011, Maamulka Guud ee Saxaafadda iyo Daabacaadda iyo Wasaaradda Ilaalinta Deegaanka ayaa si wada jir ah u soo saaray "Ogeysiiska ku saabsan hirgelinta Daabacaadda Cagaaran" taasoo caddeysay fikirka hagaya, baaxadda iyo ujeeddooyinka, abaabulka iyo maaraynta, heerarka daabacaadda cagaaran, cagaaran shahaadada daabacaadda, iyo qabanqaabada shaqada ee hirgelinta daabacaadda cagaaran. Iyo taageerida tallaabooyinka ilaalinta, iwm, waxay sameeyeen geyn ballaaran si kor loogu qaado hirgelinta daabacaadda cagaaran.
Bishii Abriil 6, 2012, Maamulka Guud ee Saxaafadda iyo Daabacaadda ayaa soo saaray "Ogaysiiska ku saabsan hirgelinta daabacaadda cagaaran ee buugaagta ee Dugsiyada Hoose iyo Sare", oo lagu sheegay in buugaagta dugsiyada hoose iyo kuwa sare ay daabacaan shirkadaha daabacaadda ee helay cagaar daabacaadda shahaadada sheyga ee sumadda deegaanka. Himilada shaqadu waa in laga bilaabo xilli-dugsiyeedka deyrta ee 2012, tirada buugaagta dugsiga sare iyo kuwa sare ee daabacan ee cagaaran ee loo isticmaalo meelo kala duwan ay tahay inay noqdaan 30% wadarta isticmaalka buugaagta dugsiga hoose / dhexe iyo sare; Sannadkii 2014, Waaxda Maamulka Daabacaadda ee Maamulka Gobolka ee Wararka, Raadiyaha, Filimka iyo Telefishanka ayaa ku dhawaaqday in buugaagta dugsiyada aasaasiga ah iyo kuwa dugsiga sareba ay asal ahaan ka dhabeyn doonaan Baahin buuxda ee daabacaadda cagaaran.
"Shuruudo farsamo sumadeyn alaabeed oo loogu talagalay daabacaadda dheellitirka" ayaa lagu dabaqi karaa khaanadaha daabacaadda oo aan ka ahayn kuwa lagu daaweeyo shucaaca. Waxay loola jeedaa heerarka calaamadeynta deegaanka ee Japan, Australia, South Korea, New Zealand iyo dalal kale, waxayna si guud u tixgelineysaa xaaladda farsamo iyo wax soo saarka soo saareyaasha daabacaadda miisaanka dalkayga. Iyada oo ku saleysan sifooyinka deegaanka. Shuruudaha xakamaynta ee dareeraha benzene, biraha culus, xeryahooda kacsan, xeryahooda hydrocarbon udgoon, iyo saliidaha qudaarta ku jira khaanadaha daabacaadda. Isla mar ahaantaana, xeerar ayaa loo sameeyaa isticmaalka nabdoon ee wax soo saarka, si wax ku ool ah u isticmaalidda iyo keydinta kheyraadka, iyo yaraynta wax soo saarka iyo adeegsiga qaanadaha wax lagu daabaco. Iyo saameynta deegaanka iyo caafimaadka aadanaha ee habka qashin qaadista, hagaajinta tayada deegaanka, iyo dhiirrigelinta wax soo saarka iyo adeegsiga alaabada sunta yar, ee isbeddelaya.
Iyo in la arko in khadku yahay khad deegaan u roon, iyo inuu saamayn taban ku yeelan doono qoraaga, waxaan inta badan tixgelinaynaa labada qodob ee soo socda: Kow, Biraha culus. Caadooyinka buugaagta carruurta awgood, biraha culus ee khadku ku jiro ayaa laga neefsan karaa afka. Midda labaad waa arrin kacsan. Waxa ka mid ah dareeraha iyo waxyaabaha lagu daro khadkan, waxa ku jira hydrocarbons, aalkolo, esters, ether, ketones, iwm. Way uumi bixi doonaan markay khadku qalalaan oo ay galaan nidaamka neefsashada ee akhristaha.
Marka maxay yihiin noocyada ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'infakshanka deegaanka u habboon'?
1. Khad casaan ah
Tikniyoolajiyadda khadadka bariiska ee bariiska ayaa ka soo jeeda Japan. Waqtigan xaadirka ah, hay'ado iyo shirkado badan oo ku yaal Shiinaha ayaa cilmi baaris ku haya. Sababta ugu weyn ayaa ah in Shiinaha iyo Jabaanba ay yihiin dalal waaweyn oo cunno iyo soo saar bariis ah. Xuddunta bariiska ee la soo saaray inta lagu gudajiray geeddi-socodka bariiska ayaa loo isticmaalay oo keliya quudinta xoolaha. Ma aysan sameynin qiimaheeda ugu badan, iyo horumarinta tikniyoolajiyadda soo saarida saliida bariiska iyo horumarka tikniyoolajiyadeed ee saliida bariiska ee khadku kaliya ma aysan kordhinin qiimaha rootiga bariiska, laakiin sidoo kale waxay sii wanaajiyeen ilaalinta deegaanka iyo horumarka waara ee daabacadaha. .
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee khadadka bariiska bariiska ah waa: khad VOC (Iskuduwaha Organic Isku-dhafka, iskudhafyada isku-dhafan ee dabiiciga ah) haraaga, guuritaanka hooseeya, wasakheynta deegaanka oo hooseysa; kheyraadka bariiska way fududahay in la soo koobo, iyadoo la waafajinayo xaaladaha qaran ee dalkayga; khad caleenta bariiska leh dhalaal sare, daabacan Waxaa jira haraaga waxyeelada yar iyo amaanka sare.
2. Khad khamri ku saleysan saliid
Hydrocarbon-ka udgoon ee saliida macdanta ee khadku wuu yaraaday ama lawaayay, iyo saamaynta VOC wali lama hubo. Sidaa darteed, maaddada saliidda ee soybean ku jirta ee qayb ka mid ah saliidda macdanta lagu beddelay saliidda soybean ayaa muuqata. Ka dib markii saliida soybeerka waxyar la nadiifiyo, waxaa lagu qasaa waxyaabo lagu daro sida midabbada iyo xarkaha. Khadka soyku sidoo kale wuxuu leeyahay faa iidooyin badan: iska caabin xoqida, ur aan dhib lahayn, iftiinka iyo kuleylka iska caabinta, fududahay in dib loo warshadeeyo, midab balaaran, iwm Marka lagu daro saliidda soybeerka, saliidaha kale ee khudradda ayaa sidoo kale la isticmaali karaa, sida saliidda linseed.
3. Khad biyo ku saleysan
Khadka biyaha ku saleysan kuma jiraan dareeraha dareeraha ah ee isbeddela, wuxuuna kaliya u baahan yahay in lagu qasi karo biyo daabacaadda. Sidaa darteed, khadku biyaha ku saleysan yahay wuxuu si weyn u yareeyaa qiiqa VOCs wuxuuna iska ilaaliyaa wasakheynta xeryahooda dabiiciga ah ee is bedbeddela. Isla mar ahaantaana, waxay si weyn u yareysaa walxaha halista ah ee ku haray dusha sare ee badeecada daabacan, waana mid ka mid ah noocyada khadadka ee intooda badan la kulma heerarka ilaalinta deegaanka ee cagaaran. Intaas waxaa sii dheer, ku-xirnaashaha qashin-qubka biyaha ayaa sidoo kale yareyn kara halista dabka ee ay sababaan korantada ma guurtada ah iyo dareeraha dabka ololi kara, waxayna yareyneysaa urta haraaga ah ee ku harta dusha qalabka daabacan. Sidaa darteed, ku adeegsiga xirmooyinka biyaha ku jira ee ku jira baakadaha cuntada, baakadaha carruurtu ku ciyaarto, tubaakada iyo baakadaha aalkolada ayaa sii kordheysa.
Ugu dambeyntii, aan ka hadalno hannaanka dahaarka. Laminating waa geedi socod dhameystiran oo loogu talagalay qurxinta dusha sare ee alaabada daabacan, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha daabacaadda iyo baakadaha. Si kastaba ha noqotee, geeddi-socodyo badan oo daahan ayaa wali isticmaalaya tiknoolajiyada dahaadhka, taas oo waxyeello weyn u leh deegaanka iyo jirkeena. Tiro badan oo dareeraha ah oo ay ku jiraan benzene ayaa loo isticmaalaa habka dahaadhka, benzene-na waa kansar xoog leh. Sidaa darteed, nolosheena, waxaa jira tiro badan oo daabacaad iyo badeecado baakidh ah oo lagu huwado teknolojiyadda dahaadhka deg-degga ah, sida daboolka daboolan ee buugaagta buugaagta iyo buugaagta kale, kuwaas oo waxyeello weyn u leh, gaar ahaan carruurta. Sida lagu sheegay warbixin cilmi-baaris ah oo ka timid Ururka Kansarka Qaranka ee Ameerika, carruurta ay ku dhacaan alaabooyinka ay ku jiraan benzene muddo dheer waxay u badan tahay inay ku dhacaan cudurrada dhiigga sida leukemia. Sidaa darteed, buugaagta carruurtu waa inaysan u isticmaalin habka duubista sida ugu macquulsan.
SmartFortune wuxuu aad ugu fiicanyahay soo saarida buugaagta, shirkadu waxay kuxirantahay daabacaad tayo sare leh, sanadihii ugu dambeeyay marka laga reebo sanduuqa baakadaha iyo boorsada warqada, iyadoo diirada la saaray horumarinta iyo soo saarida buugaagta waxbarashada caruurta, buugaagta kartoonada, waxay ku hogaansantay heerarkeeda sare la kulmo oo dhaafto shuruudaha macaamiisha.